Herisetra ara-pananahana :: Lehilahy mpanotra voampanga ho nanolana ankizivavy • AoRaha
Nosamborin’ny zandary sy natao famotorana ary naiditra am-ponja vonjimaika ny lehilahy iray, valo amby efapolo taona, voatondro ho nanolana ankizivavy, efatra ambin’ ny folo taona, tany Imerimandroso-Ambatondrazaka, tamin’ny alakamisy 6 aogositra lasa teo. Mpanotra ity voarohirohy. Ankizy niotra tao aminy io niampanga azy ho nanao herisetra ara-pananahana io.
Natolotra ny Fampanoavana tany an-toerana, omaly, ny raharaha. Samy naseho ny mpitsara mpanao famotorana ny olona voampanga sy ny mpitory. Nivoaka taorian’izay ny fanapahan-kevitra amin’ ny famonjana vonjimaika.
Tany Tanandava, tanàna lavidavitra an’Imerimandroso no nisehoan’izao fiampangana noho ny fanolanana izao, dimy andro lasa izay. “Nanatona mpanotra mahay sy malaza eo an-tanàna ilay ankizivavy, taorian’ny fianjerany sy nahafolaka ny tongony. Tamin’ izany no nitantarany ny fanolanana nihatra taminy. Tonga tany amin’ny ray aman-dreniny ny fitarainan’io ankizy io, izay nohamarinin’ny mpitsabo ”, araka ny fanampim-baovao azo avy amin’ny zandary any Imerimandroso nanao ny fanadihadiana.
Voasambotra, tamin’ny sabotsy lasa teo, ilay mpanotra ary io natolotra ny fitsarana, omaly, io.
Loza teny Ambodimita :: Mpandeha môtô maty tsy tra-drano
Fitsaram-bahoaka hafa kely :: Nofidian’ny fokonolona ireo dahalo tena raindahiny